Saripika: Sary Maneho Ny Fiainan’ny Vondron-piarahamonina iray Mahantra Ao Antanàn-dehiben’i Manila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2013 7:45 GMT
Miaraka amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ireo Filipiana Mpaka Sary Andalam-be, nitarika fakàna sary an-dalambe iray i Mark Z. Saludes, tany aminà vondrom-piarahamonina mahantra ao an-tanàn-dehiben'i Mandaluyong, faritra atsinanana ivelan'ny tanàn-dehibe ao Manila.
Na dia eo aza ireo fandrosoana voalaza ao amin'ny firenena, mbola mampialokaloka mpanjanaka an'aliny maro tsy ara-dalàna foana i Manila. Ianjadian'ny fandrahonana fandrodanana hatrany ireo vondrom-piarahamonina mahatra an-tanàn-dehibe mba hanomezan-toerana ireo “drafitra fampivoarana”. Nanome tetikasa famindràna fonenana ny governemanta, saingy maro amin'ireo fianakaviana no maniry hijanona eo amin'ny fonenan'izy ireo satria mitaky fandaharan'asa fanomezana fonenana any an-tanàn-dehibe na manodidina ny tanàn-dehibe izy ireo izay ahitàna sekoly sy toeram-pitsaboana ary ireo tolotra hafa.
Manome topimaso ny fiainan'ny vondrom-piarahamonina mahantra ao an-tanàn-dehiben'i Mandaluyong ireo sary an'Atoa Saludes. Vondrom-piarahamonina iray izay tsy ho ela dia mety ho harodana.